Unyaka omusha lihlukile amanye amaholide wesibhakabhaka ayekufezile: iphunga umuthi bukhoma Christmas, owembethe womkhosi wawo okuqonda sibonwa, a vase enkulu Mandarin elikhanyayo, sesivuthiwe futhi elimnandi futhi ejwayelekile unyaka nonyaka, omunye izitsha main etafuleni - isaladi "Olivier". Abanye abantu ukuqala ukulungiselela iholide kaNcibijane izinyanga ezimbili noma ezintathu, ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo nezipho kubangani bakho osondelene nabo nezihlobo. Kodwa iningi labantu kwesokunxele kuleli ngesonto eledlule kokuhlupheka elihlobene ne ekutholeni izipho ehloniphekile futhi original abathandekayo bazo. Ikakhulukazi le osebenza emadodeni imibuzo 31 Disemba: "Yini ukuba nginike, kube nomkakhe koNyaka Omusha?" Noma, Futhi baqala liphindelela baphuthuma izitolo, washo off emashalofini zonke ilandelana "Yini ukunikeza intombazane koNyaka Omusha?".
Abantu abakholelwa ukuthi khetha futhi uthenge ngesipho New Year unkosikazi ka- - kuba impela esindayo futhi kuyisicefe, babenza iphutha elibi. Phela, izipho, okhethiwe umphefumulo, kubuye kube mnandi, sifane nokuthola izincwadi kubo. Ukwazi izithakazelo umkakhe amthandayo, kuyoba lula ukuba anqume ku isipho, into esemqoka ukuya ngokuthenga akusiyo uNcibijane, njengoba ngaleso sikhathi esitolo amashalofu angenalutho kakade. Ngakho lalela inhliziyo yakho futhi uzokutshela impendulo yombuzo othi: "babe epha nomkakhe uNcibijane?" Futhi qaphela ukuthenga samanje.
Isipho sakho kufanele kube "kwabayishumi abaphasa ngamalengiso", ngoba ungumuntu abaseduze yingxenye yokuphakama kwalo yesibili. Kufanele kube ezithakazelisayo, engaqondakali, enhle, efiselekayo kanye engavamile. Musa ukuthenga umkakhe njalo ngonyaka ejwayelekile iqoqo amashampu yezimonyo, eshaweni si kanye insipho. Isimanga abathandekayo bakho, Hlakanipha!
Nokho, lokho ukulinika nomkakhe uNcibijane:
Beautiful lace Lingerie noma sexy negligee. isipho esinjalo yimuphi owesifazane babefika injabulo engachazeki.
Jewelry - a uyakufanelekela isipho langa abesifazane noma ngabe isiphi isikhathi. Kungaba umgexo, namacici, imihlobiso elengayo, namasongo, namawashi, lapho Ukudayela lihlotshiswe ayigugu.
Hlela impelasonto romantic ekhaya iholidi, noma ulwandle izwe angavamile.
Nokuhamba yokudlela Chic Nokho, etafuleni kufanele zibhalise kusengaphambili.
Kusukela isitifiketi Spa-Salon ayisesemikhulu yakho unganikeli ncamashi, kodwa uma ukuthenga isitifiketi ukuvakashelwa ilunga nezinqubo, uzozwa uphawu ukubonga amazwi eziningi ezinhle ngami.
Yenza studio photo noma portrait umculi sika Faka isithandwa sakho, isibonelo ngesimo a Queen enhle esinesithunzi noma Venus de Milo.
Uma umngane womshado othanda ukupheka, kuyoba isipho esimangalisayo noma multivarka aerogrill. Ngemva isipho esinjalo umka uzokujabulela sokudla okwehla esiphundu futhi unempilo.
Isethi zitsha ezinhle noma izibuko. Omuny ngamunye wesilisa samaholide update service, noma ukushintsha ubudala kuya sotejnik emisha ngisho non stick enamathela.
Bottle amakha ozithandayo futhi isipho nice, kodwa uma lisetshenzisiwe ngisho nesipho ikhadi ethile, umlingani uzokwazi ukuthenga ku isitifiketi edingekayo izimonyo.
10. Ungabi namahloni okucela ngqo unkosikazi ukuthi angathanda ukuthola isipho esivela kuwe, inguqulo yayo okuhlongozwayo lula ngawe ukucinga samanje.
Kunoma ikuphi, noma yini wanika oshade naye, kubalulekile ukuthi Uzokwethula ke ukukhipha futhi. Ngokwesibonelo, kahle isipho ehlotshisiwe e evala iphepha ngomnsalo elikulo ebangela abanye bethuthumela futhi umuzwa emnandi, lapho unwrapping izipho. Phela, umamukeli ngamunye akazi kahle ukuthi get phama. Futhi uma lapho ukupha othile isipho okushoyo uthando izwi ngemfudumalo, yimuphi izinhlobo engabizi kuyoba izipho ezibizayo kakhulu emhlabeni.
Uthando raduyte nomunye!
Isipho best for unyaka omusha izingane - imibono original
I-Cancer ezinja: izimpawu kanye nokwelashwa
Isixazululo for inhalation ukhwehlela: ukubuyekeza amalungiselelo engcono Izibuyekezo ngazo